एसईई वैशाखमा गर्ने बोर्डको तयारी « Ghamchhaya
एसईई वैशाखमा गर्ने बोर्डको तयारी
९ माघ २०७८, आईतवार १२:२१
Students wearing face masks are seen in their classroom duringagovernment organised media tour at Shanghai High School after it reopened in Shanghai on May 7, 2020. – Some schools in China that have been closed or online-only since January began gradually reopening last month, with Beijing and Shanghai letting some students return last week. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
काठमाडौ / माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) वैशाखमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले एसईई वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षा जेठमा गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । उनले भने अहििलेसम्मको परिस्थितिमा एसईई वैशाखमा र जेठमा १२ को परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको वताउँदै चाँडै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाए ।
कोभिडको कारण विद्यालय बन्द भएकोले बोर्डले तोकेको समयावधिको अवस्था हेरेर कुन मोडालिटीमा परीक्षा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
बोर्डले यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर चैतभर पठनपाठन गर्ने र वैशाखमा परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै एसईईको परीक्षा प्रदेशस्तरीय गराउने बोर्डको तयारी थालेको जनाएको छ । बोर्डले यही शैक्षिक सत्रदेखि संविधानले र शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताएका छन् ।